Madaxweyne Obama oo laga xirtay albaabadii Aqalka cad, meel uu ka galana waayay. (Daawo Video) - Caasimada Online
Home Maqaalo Madaxweyne Obama oo laga xirtay albaabadii Aqalka cad, meel uu ka galana...
Madaxweyne Obama oo laga xirtay albaabadii Aqalka cad, meel uu ka galana waayay. (Daawo Video)
Mararka qaar waxaa iska dhaca waxyaabo cajiib ah oo aadan marnaba fileyn inay dhacayaan. waxaa ka mid ah dhacdo qabsatay Madaxweyne Obama, oo dhammaan albaabadii aqalka cad laga xirtay meel kuu galana waayay.
Lama yaqaan sababta ay arrintan ku dhacday, ama inay ahayd in madaxweynaha xilli aan la fileyn uu kusoo laabtay aqalka cad.
Video-ga hoos ka muuqda ayaa muujinaya Madaxweyne Obama oo isku dayaya inuu furo dhowr albaab oo aqalka cad ka tirsan, si uu u galo gudaha, balse midkii uu isku dayo inuu furaba uu ka xiran yahay, Daawo Video-ga oo marka hore ku billaabanaya xayeysiin.